Su'aal Islands Canary.
Bilood 9 1 maalin ka hor #1239 by josmor
Waxaan kaliya soo dejiyey software Canary Islands 1 iyo 2. Laakiin waxaan eegaa in saameynta lagu muujiyay fiidiyaha kaliya ay la shaqeyso REX 2.0. Waxaan baaray internetka, mana aanan helin. Sidee baan u heli karaa saamaynta quruxda badan ee Canary Islands?
Bilood 9 1 maalin ka hor #1240 by Dariussssss
Tani waa meel aad u qalad ah oo aad ku dhejisid dhibaatooyinka aad la leedahay tijaabadaada. Fadlan ku dhaji dhibaatadan hoosta mawduuca, waa FSX ama P3D.
Waxaan sameyn doonaa sida ugu fiican ee aan kuugu caawin karno.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.442